Hamro Pustaप्रम ओलीको घोषणा : ‘साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी वृद्धभत्ता बढ्छ’ – Hamro Pusta
प्रम ओलीको घोषणा : ‘साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी वृद्धभत्ता बढ्छ’
२०७७ चैत्र १७, मंगलवार
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता (वृद्धभत्ता) बढ्ने घोषणा गरेका छन् ।
‘अब साउन १ गतेबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्छ, कसैलाई आपत्ति लाग्ला । सामाजिक सुरक्षा भत्ता साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी बढाइने छ,’ उनले भने, ‘बुढाबुढी पनि हेर्न थाल्यो, यो सरकार छिटो हटाउनुपर्‍यो । मान्छेहरूलाई भरेबाट अर्काे छटपटी शुरू हुन्छ, निद्रा लाग्दैन ।’
‘केहीले भन्ने गरेका छन्, आधा–आधा थियो खै आधा–आधा ? भन्छन् । त्यो कागज बीचमै च्यातेर प्रचण्डले कार्यकारी चाहियो भनेको होइन ?’ उनले भने ।
यसै चैतमा महाधिवेशनको मिति तोकेर आफूले अध्यक्ष छाड्दा खोज्दा पनि अहिल्यै चाहियो भनेर विवाद गरिएको ओलीले बताए । ‘मैले भनेको हो – चैतमा महाधिवेशन गरौं, अध्यक्ष हुनुस्, महाधिवेशनको म्याद पनि तोकिएको थियो । यही २५–३० गतेसम्म अध्यक्ष माधव नेपाल भए भइहाल्थ्यो, मैले म हुन्न भन्दिएकै थिएँ । यति हतार ! तुरुन्तै चाहियो, अहिल्यै चाहियो,’ उनले भने, ‘मसँग अध्यक्षमै चुनाव लडेर हारेको मान्छे, मलाई चाहियो, मलाई चाहियो । धन्न मेरो निर्वाचन क्षेत्रको भएनन्, नत्र मलाई चाहियो भनिहाल्ने । चाहियो, चाहियो भनिहाल्ने ।’
ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एकता गर्ने भनेर सिध्याउन खोजेको टिप्पणी गरे । ओलीले भने, ‘एकता गर्ने, एकता गर्ने भन्यो, पछि सिध्याउन खोजे ।’
प्रचण्डले केटाकेटी जस्तो सूर्य चिह्नमा दाबी गर्दा छक्क परेको उनले बताए । ‘प्रचण्डले सूर्य चिह्न मेरो हो भन्दा छक्क परें,’ उनले भने ।
नेपालमै बनेका विद्युतीय मोटरबाइक भोलि सार्वजनिक हुँदै
नेपालमा थप २४२८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ५ जनाको मृत्‍यु